Bilisummaa oromootiif – Welcome to bilisummaa
bilisummaa April 12, 2014	Leave a comment
GUFUUN WARAAQSA OROMOO BAKKA HUNDATTI NI CABDI.
Oromiyaa walabomsuuf muranneetiin kaane
Gufuun heddumaate warraaquu dadhabne.
Abdi oso hin kutin hifannelle hin dhiisin
Jijjiiramnni gad dhufnnaan
gad bayeetiin labsamnnaan
Garaa nafaan fudhanne.
gaafii takka hin gaafanne
Itti seennee woorraaqsine
ka luuxee nu ceela’u Abaarree abaarsfinne.
Kan qabssoo bakkaan gayu
nu hiriirsuu dandayu
jennee osoo dhibamnuu
Hadoonnee odoo teennuu
Dhiirtti gubbaa gad dhuftte
nu huu ni jirra jette
Bakka hunddaa sochooftte
kan haamileen cacabee
Qabsoo tanaaf dhibamee
Akka qabsaawuun dhabee
Aariin karaarra dabe
Dachaane kootta dhaame
Tokkummaa qabsaayoota labsee
Muratee ka’uu hime.
Jallan dhugaan muratte
Dina dhayuuf kutatte
Jaallan woliin woltaatee
Diina keessaa wol yaamttee
Hunda irraa dubbata
Bitaa mirgaa dhaadata
Dhoofinnee gallaa himata
Jarri tunniin qabsayota
Hundatu waliin dhaabatta
WBO kan nuu makamtte
General Kamali fi Hayiluun
Abdi ormoo ol kaaftee.
Kanaf isaanis filanne
Harkas itti kennanne
Hoogana ta’aa jenne
Asii achiin marsinee
Xiqqoo woyyaa fakkaanus
Generalota Kamaali fi Hayiluun boonnus
Ammas qaawi hin cufamnne
Harcaatuun deemtte hin dhumne.
Bakka jirru dhibamnnee
maalttu nu bu’e jenne
yoo laallu qalbeefanne
arrab lamee argine
Isaan ta’uu hubanne
Duraanuu osoo beennuu
Ol baafnnee hin dubannu
Osoma wol sodaannuu
Dhibee teenna dhofannuu
Raajiin gubbaa gad dhuftte
Hundda ifa nuu baaftte.
Ka aangoof bololanii
Nu digaatiin turan
Ifaan gad muldhatan
Mee takkaa haa dubadhuu
Silaa garaa hin kaayadhuu
Ka kalee Kamal farsse
Hayiluu lee itti aansse
Booyee imimmaan yaasee
Jayinummaa saanii labsse
Hadha san irraanfatee
Maatii isaa yaafatee
Arrabaalleen yoom hile.
Nu yoomiin kana beenne
Akkanaaleen hin eenne
Nuu haa dalaguu jennee
mindaa itti ramanne
Fuuraa malee nyaachifnne
Qoree dhoqqee keessaa ta’uu isaa yoom beenne
kanaa galanni keenna
Bada Hasan salphataa
Amma maal ta’uu feeta?
Mataa lafa awwaalttee
Garatti cokoo baattee
nu diguuf tattafatte.
Akkam haataanuu feeta?
Sanyiin nu bullchuu fi taataa?
Maaf oduu fafacafta
Tana arggatuu hirmmi
Gurbbaa doomii tutumi
Sitti haataatu hirmmii
Raajima nu qabate
Ammas yoomiin dhaabate
Abbaa ilmmaan bobaatee
Nu diiguu fi wolii galtte
Ganttuu nurra bobbaafitte
Hasan eennuun of seete?
Aango irra turuu feetee?
Si haa muunnuu ka jeelttee?
Ajab dubbii baranaa
Akkam taana jarana?
Maal sirraa hambifanne?
Namana maal sii hafinne?
Maqaa abbeetii dhiifnnee
Abbaa Hasanoon yaamnne
Kabajaa itti goonee
Inni dhufnnaan ol kaanee
Dubbii isaa faarsinee
Ol fuunee samiin geenne
Osoo takka nu hin beenne
Kufaatii hin kaane kufttee
Nama hin taatu deebitee
hin cacabdda bututtee
mata lafatti awwaltee
Aanaa addaan cicirtte
Hin milkooftta of seetee?
Hasan bada jallataa
Boombbii namaaf awwaalteen
Ofumaa dhooyuu deemtta
Ka abbaamaa raajima
mee takkaa irraa himaa
Mataa maanguddoo goonee
Osoma deemnnuun baannee
Kabajaa itti goone
Xurii irraa dhiquuf muranne.
‘Haa ta’u malee’
Nu duruu isa beenna
beekkaan irra diddibna
Darggii jala leenji’e
Hin miliqa yoo fedhe
Dabballee cimaa ture
Ka Arbaa Guuguun gurgure
Milishaa darggii ta’ee
Kan Jamaal robaleetti bobba’ee.
Kana hundda baadhannee
osoo deemnnuun tirannee
Ofii ala of baaftte
Narra dedeemaa jette
Maqaa qabssoo himattee
Jabaa jalaan dayattee
Nutti seenttee dhokatte
akka saree maraattee
Olii gad uutaalttee
Sa’aa nama maaxarttee
Hasaniin filaa dhaamttee
Ilmma kankkee ergitee
aadunya irratti bobbaafitte.
Sunillee kufaan kufee
Bitaa mirgga gulufee
Booyee imimmaan buusee
Hasaniin filaa gorsse
oromoon itti kolfite
kun maraataan maal fedha?
Maaluma ta’aa jedha?
Jedheetiin wol gaafate
Bitaa mirgga odeefate
Kan diragiin mataa nyaate
Ofi hin beeku maraatee
Joobir takkaa hin milkoofnne
Ati hoongaya siin jenne.
hin jiraa jirree taata
bakka hundda qaanoftta
Wol qabannee haa kaanu
diina harkka hin kennannu
Ta aanggoo fi bololiitu
Isiin uguruu hin geettu
Ofumaa ofi sakaaltti
wol guurattee bututti
duuba mirgi keenuma
wol taanee injifanna
Shakkii hin qabnnuu ni moona
oromiyaan ta oromooti
gaaf tokko hin dhugoomtti.
Previous LAFEE OROMOO CACCABSITEE NYAATAA?*
Next Akka waan Oromoof loltanii